Super Arc Mwenje inowanikwa mahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Super Arc Mwenje inowanikwa mahara kwenguva yakati rebei
Zvekare tinokupa iwe mutsva mutambo kurodha mahara. Super Arc Mwenje ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye1,99 euros, asi kwenguva yakati rebei, tinogona kuirodha mahara. Super Hexagon uye Geometry Hondo dzinobatanidza mune ino arcade shooter. Super Arc Chiedza inotitaridza neyechokwadi-bhatani-kutonga system iyo inotipa isu neyekupfura mutambo ruzivo nemhepo yeRetro. Uyu ndiwo mutambo chaiwo unozotisungira kuchigaro kwemaoko mashoma maawa chero bedzi tine bhatiri rakaringana mumudziyo wedu.
Munguva yekuvandudzwa kwemutambo isu tinofanirwa kuyedza kurarama kwenguva yakareba sezvinobvira nekutora pasi vavengi vakaomesa nekukasira uye nemazvo kuti titore iyo yepamusoro zvibodzwa. Sezvo isu tichifambira mberi mukuvandudzwa kwemutambo, isu tichava nezvombo zvakawanda, chimwe nechimwe chazvo chinotipa chinoyevedza chinoonekwa chinovhenekera iyo skrini ichiparadza vadzivisi vako mune yedu nzvimbo rwendo. Chikwata chiri shure kwekusimudzirwa kwemutambo uyu, neNo Code Ltd Studios, timu yakamboshanda yevanogadzira basa, vakunda mubairo weBAFTA uye takabatana mukusimudzira Mutorwa: Kusurukirwa.
1 Super Arc Mwenje Zvimiro
2 Super Arc Chiedza ruzivo
Super Arc Mwenje Zvimiro
Kurumidza uye retro kupfura mutambo ruzivo
Mafungu evanonetsa vavengi kuti vakunde
18 zvombo zvisina kuvhurika
Zvinoshamisa zvinoonekwa zvinoonekwa
Nzvimbo dzepasi rose
Dzakawanda dzinovhurika zvombo
Super Arc Chiedza ruzivo
Kugadziridza kwekupedzisira: 04-05-2016
Saizi: 88.2 MB
Kugarisana ne iOS 6.0 kana gare gare. Izvo zvinoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Panguva yekutsikisa ichi chinyorwa, mutambo unowanikwa kurodha pasi se zvachose mahara uye pasina chero mukati-app kutenga. Zvichida kuti nekufamba kwemaawa, mutambo unomira kuve wakasununguka, saka hazvitore nguva kuti uutore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Super Arc Mwenje inowanikwa mahara kwenguva yakati rebei
Iyo TOP 15 mitambo ye iPhone
Yekukurumidza kuenzanisa pakati peIOS 10 Beta 3 uye iOS 9.3.2